ဘာသာရေး ဆိုင်ရာ အမေး (၅၀ ) နှင့် အဖြေ (၅၀ ) အပိုင်း ၃
မေ ၈, ၂၀၁၇ - ၉:၁၂ ညနေ News Code : 828582 Source : ABNA Link:
ဘာသာရေး ဆိုင်ရာ အမေး (၅၀ ) နှင့် အဖြေ (၅၀ ) အပိုင်း ၃ အဖြစ် အဗ်နာ ချစ်ပရိတ် သတ်များ ကို မေးခွန်း ၁၀၁ မှ ၁၅၀ အထိ ဖော်ပြ အပ်ပါတယ်။
(၁၀၁)မေး ။ ။ သခင်မကြီး မာစူမာယေကွမ်း (အ.စ) ၏ ဇေယာရတ် ပြုခြင်း အကျိုး အမြတ် ကို သိပါရစေ?
(၁၀၂) မေး ။ ။ အေမာမ်မဟ်ဒီ (အ.ဂျ) အနေဖြင့် သခင်မကြီး ဟဇရတ်ဇဟ်ရာ (အ.စ) နှင့်ပတ် သက်ပြီး မည်ကဲ့သို့ မိန့်တော်မူ ထားပါသနည်း
(၁၀၃) မေး ။ ။ ဖခင်အနေဖြင့် (မိမိ)သားအတွက် ထမ်းဆောင် ၊ပေးရမည့် တာဝန်များ အနက်မှ တစ်ခုသည် စာရေးတတ်အောင်သင်ကြားပေးခြင်းဆိုသည်မှာ ဟုတ်ပါသလား၊
(၁၀၄)အမေး ။ ။ အဘယ်ကြောင့်လေးပါးမြောက်အေမာမ်အား ၊ အေမာမ် စဂျဒ် (အ.စ) ဟုခေါ်ဆိုရပါသနည်း
ဖြေ ။ ။စဂ်ျဒါပြုရာတွင်ထိရသောနေရာ၇နေရာစလုံး၌စဂ်ျဒါပြုထားသည့်လက္ခဏာ၊ အာနိသင်များ ထင်ရှားနေသဖြင့် စဂျဒ် (အ.စ) ဟုခေါ်ဆိုရပါသည်။
ဤအကြောင်းကို အေမာမ်မိုဟမ္မဒ်ဘာကေရ် (အ.စ) မိန့်ထားသည်ကို လေ့လာနိုင်ပေသည်။
(၁၀၅)မေး ။ ။ စလာမ် …
အဆုံးမဲ့လေးစားစွာဖြင့် တင်ပြလိုပါသည်။ နမာဇ်ဂျိုမာ ၂ ရကတ် ဖြစ်ပါသည်။ (ဥပမာ ၊နမာဇ်ဖဂ်ျကဲ့သို့)၊ကူနူးသ် ၂ ခုဖတ်ခြင်းသည် မွစ်သဟဗ် ဖြစ် ပါသည်။ ပထမကူနူးသ် သည် ပထမရ ကတ်၏ ရကူအ် မတိုင်ခင်ဖတ်ရပြီး ၊ဒုတိယ ကူနူးသ် သည် ဒုတိယ ရကအတ် ၏ ရကူအ်ပြီးမှ ဖတ်ရပါသည်။
အကယ်၍ အေမာမ်ဂျိုမာ(သောကြာရှေ့ဆောင်ဆရာ) အနေဖြင့် ပထမ ကူးနူးသ် အားပထမရကတ်၏ရကူအ် ပြီးမှ ဖတ်ပါသည်။
တဆက်တည်းမှာပင် နောက်မှ လိုက်ဖတ်သူတစ်ချို့ (သို့) အနည်းဆုံး တစ်ယောက် သည် ရှေ့ဆောင်ဆရာ ကူးနူးသ် နေရာမှားဖတ်လိုက်ကြောင်းသိပေသည်။ သို့သော်ရှေ့ဆောင်ဆရာ ကို ပြင်ဖို့(နမာဇ်အတွင်း) မလုပ်ခဲ့ကြချေ။
၁။ ပထမ(မေးခွန်းအနေဖြင့်) နမာဇ်ဂျိုမာ မှန် ၊မမှန် သိလိုပါသည်
၂။ (သတင်းလွှင့်သည် ဤနောက်မှလိုက်ဖတ်သူတစ်ယောက်၏လုပ်ရပ်သည်) မမှန်ချေ။
(၁၀၆)မေး ။ ။ ဗစ်မေဟီသအာလာ
လေးစားအပ်ပါသော ဟဇရတ် အာယာသွလ်လ္လာဟ် အလ်အွဇ်မာ လွတ်ဖ် ဖွလ်လ္လာဟ်ဆွာဖီ ဂိုလ်ဗိုင်ဂန်နီ ဟဖွဇ်ဇဟိုလ်လ္လာဟ်
အဆုံးမဲ့ရိုသေစွာဖြင့်တင်ပြအပ်ပါသည်။ကျွန်တော်သည်ဟဇရတ်အာယာသွလ္လာဟ်အလ်အွဇ်မာအလ်ဟဂ်ျနာစေရ်မကာရေမ်မိုရှီးရာဇီးဟဖွဇ်ဇဟိုလ်လ္လာဟ်၏စာအုပ်၊အမည် ((ရှီအာဖါစိုခ်မီးဂူယက်ဒ် )) ကို အာယာသွလ်လ္လာဟ်ကြီး၏ ခွင့်ပြုချက်နှင့် (ကျွန်တော်အပေါ်) ယုံကြည် မှုဖြင့် ဘာသာပြန်ဆိုခဲ့ပါသည်။
အလ်ဟမ်ဒိုလစ်လ္လာဟ်ပုံလည်းနှိပ်ပြီးသွားပြီး၊လူထုအားလည်းအခမဲ့ဝေပြီးပါပြီး၊ သို့သော်နိုင်ငံတူ တစ်ချို့သိုလာဗ်(သာသာနာ့ကျောင်းသားများ)သည် အချို့ တာဝန်ရှိလူကြီးများဥပမာ မကါမ် မေမော်အဇမ်မေရဲဟ်ဗဲရ် ၏ကိုယ်စားလှယ်တော် ၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ (ရဲဟ်ဗဲရ်)ရုံးမှဝန်ထမ်း ၊စသည်ဖြင့် ထံ ကျွန်တော် ဘာသာပြန် မှားနေသည် စသည့်ဖြင့် တိုင်ထားကြပါသည်။
သို့သော် ကျွန်တော်အနေဖြင့်ပုံနှိပ်ထားသည်စာအုပ်အတွင်း ဘာသာပြန်အမှား များကို ထောက်ပြရန်တရားဝင်ဖိတ်ခေါ်ထားပါသည်။သို့သော်မည်သည့်
ဘာသာပြန်ဆိုသူသည်ဘာသာပြန်ဆိုရာတွင်မလွဲမသွေကမာလ်လေဒေကသ်(ထူးကဲကောင်း မွန်သည့်ဂရုပြုမှု) ၊ ပြီးနောက် အလွဲသုံးစား မလုပ်မှု ဖြင့် ပြန်ဆိုရ ပေမည်။
အကယ်၍ မတော်တဆ ဘာသာပြန်ဆိုရာ၌ မှားယွင်းသွားလျှင် ပျော့ပျော့ပြောင်း ပြောင်း၊ ညီအစ်ကို စိတ်ဓာတ်ဖြင့် မှားယွင်းနေသည့်နေရာ များကို ဘာသာပြန်ဆိုသူ အားထောက်ပြပြီး၊ဖြေရှင်းရပေမည်။ပုဂ္ဂိုလ်များကို (ဘာသာပြန်ဆို သူများ) သိက္ခာ မချသင့်ချေ။
(၁၀၇) ။ မေး ။ ။ ဟဇရတ် ဖွာတေမာ(အ.စ) သခင်မကြီးသည် ပထမခလီဖွာ အားစိတ်ဆိုးသွားကြောင်း ၊နောက်သခင်မကြီး(အ.စ) အလ္လာဟ်အမိန့်တော် ခံသွားသည့်အချိန်အထိ အဆက်အသွယ် မပြုကြောင်း ဆိုသည်အချက်မှာ ၊မှန်ပါသလား၊ ဖြစ်နိုင်လျှင် စွန္နီ ကျမ်းကြီးဖြင့်ဖော်ပြပေးပါ။
ဖြေ ။ အထက်ပါအချက်သည်မှန်ကန်ပါသည်။ စွန္နီညီနှောင်များ၏ ကျမ်းတော်မြတ် ကုရ်အာန်ပြီးနောက် အမှန်ကန်ဆုံး ကျမ်းအဖြင့် လက်ခံထားသည့် စဟီးဘုခါရီကျမ်း တွင် အထက်ပါအကြောင်းအရာ ကို လေ့လာနိုင်ပေသည်။
(၁၀၈)မေး ။ ။စူရဟ် အလ်ဟမ် ဖတ်ပြီးနောက် ((အာမီး(န))) ဖတ်ရမည်လော
ဖြေ။ ။ ရှီအာ အေမာမ် မီယာ ၏ ရှရီအီအမြင်အရ မဖတ်ရချေ။အကြောင်းသည်ကား -မိုဟမ္မဒ် ဟလ်ဘီ မှ အေမာမ်ဂျအ်ဖရ်ဒစ်က်(အ.စ) အားမေးမြန်းသည်မှာ - ((စူရဟ် အလ်ဟမ် ဖတ်ပြီးနောက် ((အာမီး(န))) ဖတ်ရမည်နည်း ။ အေမာမ်(အ.စ) အနေ ဖြင့် အဖြေပေး တော်မူသည်ကား - မဖတ်ရချေ။))
(၁၀၉)မေး ။ ။ စလာမ် …
ဖြေ ။ ။ မောင်လာနာများ၊ သာသနာပြုများအနေဖြင့် ကွဲလွဲမှု ကို ဖြစ်စေသည့် အရာများ၊ လူထု ကိုအထင်မှားစေမည့်(ယုန်ထင်ကြောင်ထင်၊ဖြစ်စေသည့်) လုပ်ရပ်များကိုရှောင်ရန်အသင့်လျှော်ဆုံး ပင်တည်း ။
(၁၁၀)မေး ။ ။စူရဟ် အလ်ဟမ် ဖတ်ပြီးနောက် ((အာမီး(န))) ဖတ်ရမည်လော
ဖြေ။ ။ ရှီအာ အေမာမ် မီယာ ၏ ရှရီအီအမြင်အရ မဖတ်ရချေ။အကြောင်းသည်ကား -မိုဟမ္မဒ် ဟလ်ဘီ မှ အေမာမ်ဂျအ်ဖရ်ဒစ်က်(အ.စ) အားမေးမြန်းသည်မှာ - ((စူရဟ် အလ်ဟမ် ဖတ်ပြီးနောက် ((အာမီး(န))) ဖတ်ရမည်နည်း ။ အေမာမ်(အ.စ) အနေဖြင့် အဖြေပေး တော်မူသည်ကား - မဖတ်ရချေ။))
(၁၁၁) မေး ။ ။ မိမိဇနီးသည် ၏ ကျင်ကြီးသွားသည့်နေရာ ကို ဆက်ယှက် ခြင်းသည် ပြဿနာ ရှိပါသလား?
(၁၁၂)မေး ။ ။ မဖာသီဟိုဂျေနန် တွင် နေ့တိုင်း၏ အချိန်တိုင်းအတွက်ဒိုအာ ၊ တစ်နှစ်လုံး၏ ရက်တိုင်းအတွက်ဒိုအာလာရှိရာ၊အချိန်ပြည့်ဒိုအာဖတ်နေရမည့် ဆိုသည့်သဘောဆောင်ပါသလား ?
(၁၁၃)မေး။ ။ စလာမ် …
အင်တာနက်မှ တဆင့် နောင်ဟာခွေများ၊ဘာသာရေးရုပ်ရှင်များကိုကော်ပီ လုပ်(ဒေါင်းလုတ်)ပြီးရောင်းပိုင်ခွင့်ရှိပါသလား
(၁၁၄)မေး ။ ။ အမေအနေဖြင့် မိမိသား ကို - မင်း ၊မင်း မိန်းမကို သလာက်မပေးရင် အမေကို စိတ်မချမ်းသာ အောင်လုပ် သူ စာရင်းဝင်ပေမည်ဟု အမိန့်ပေးမည်။ အမှန်တွင် အမေသည် မိမိချွေးမနှင့် အဆင်မပြေချေ။ သို့ဖြစ်ပါ၍ အမေ အမိန့်ကို နာခံရန် ဝါဂျစ်ဗ် ဖြစ်ပါသလား
(၁၁၅) မေး ။ ။ စလာမ်
(၁၁၆)မေး ။ ။ စလာမ် …
(၁၁၇) မေး ။ ။ သားကောင်ဇေဗာလုပ်ရာ တွင် ဗစ်မေလ္လာဟ် ဘဲ ပြောလျှင် လုံလောက်ပါသလား၊ ဗစ်မေလ္လာဟ် အား အာရဘီ မပြောဘဲ အခြားဘာသာဖြင့်ပြောလျှင် ပိုင်ပါသလား
(၁၁၈) မေး။ ။ သားကောင်ဇေဗာလုပ်ရာ တွင် ယောက်ကျားဘဲ လုပ်လို့ ရသည်ဆိုသည်မှာ ဟုတ်ပါသလား
(၁၁၉)။အမေး။။ကျွန်တော်ကွန်ပျူတာတစ်လုံးအသစ်ဝယ်ထားပါသည်။ကျွန်တော်သူငယ်ချင်းနှင့် ခင်မင်နဲ့သူများအတွက် ငွေယူပြီး မကောင်းသည့် ကားများ ကော်ပီကူး ပေးမည်ဆိုလျှင် လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိပါသလား
(၁၂၀) ။ မေး ။ ။ cd မူရင်းပိုင်ရှင် ၏ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ ဖြန့်ဝေ ခွင့်ရှိပါသလား
(၁၂၁) မေး ။ ။ စလာမ် မို အလိုင်ကွမ်း
(၁၂၂) မေး ။ ။ မိမိဇနီးသည်ဖြင့် ရှဗ်ဗေကဒ်ရ် ၊ မဟော်ရမ် ၉ ရက် ည၊ ရှဗ်ဗေ အာရှု ရာ တွင်ကိုယ်လက်နှီးနှော လို့ ရပါသလား
(၁၂၃) မေး ။ ။ ကျွန်မ အနေဖြင့် လက်ထပ်ရန် ရည်ရွယ်ထားသူတစ်ဦးရှိပါသည်။ ၎င်းသည် မွတ်စလင်တစ်ယောက်ဖြစ်သော်လည်း နမာဇ်မဖတ်ချေ။ ရှရီအတ်အရ ပြဿနာ ရှိပါသလား
(၁၂၄) မေး။ ။ နမာဇ် ဇီ မဟုတ်မှန်းသိသူ နှင့်် အသွားအလား လုပ်လို့ရပါ သလား၊ပေါင်းသင်းဆက်ဆံပိုင်ခွင့်ရှိပါသလား
(၁၂၅) မေး ။ ။ နမာဇ် ကို မဖတ် သူသည် ဘယ်အခြေအနေရောက်လျှင် ကာဖေရ်ဖြစ်သွား ပါသနည်း ၊နဂျစ်ကော် ဖြစ်ပါသလား
(၁၂၆) ။ မေး။ ။ အူဆူလေကာဖီ ကျမ်း တွင် အေမာမ်ဂျဖရ်ဆွာဒစ်က် (အ.စ) ၏ ဟဒီးစ်တော်လာရှိသည်မှာ (( စာ အတွက် အဖြေပေးရန် ၊ စလာမ်ကို အဖြေပေးရန် ဝါဂျစ်ဗ် ဖြစ်သကဲ့ သို့ ပင် ဖြစ်ပေသည်။ )) ဟု ဖြစ်ပေသည်။ ဤ ဟဒီးစ်တော် အရစာ ပြန်ရန် ဝါဂျစ်ဗ် ဖြစ်ပါသလား
(၁၂၇) မေး ။ ။ စလာမ်
ဖြေ။ ။ တမန်တော်မြတ် ဟဇရတ် အီဆာ (အ.စ) ၏မွေးဖွားချိန်နှင့် နေရာနှင့် ပတ် သက်ပြီး အကွဲအလွဲရှိပါသည်။ ထိုပြင် အတိအကျ မရှိရပေ။
(၁၂၈) မေး ။ ။ သူငယ်ချင်းများအကြား ၊ကြားဖူးပါသည်။ မုတ်ဆိတ် ကောင်း ကောင်း ထွက်လာဖို့တကြိမ်ပလိပ်ဓားဖြင့် ရိတ်နိုင်သည်ဟု ဆိုကြပေသည်။ဤ စကားသည်မှန်ကန် ပါသလား
ဖြေ။ ။ အကယ်၍ မျက်နှာပေါ်တွင် အမွေးများ မထွက် သေးပါကရိတ်နိုင်ပေသည်။ အကယ်၍ ပေါက်နေပါ ကဟိုနေရာပေါက်၊ဒီနေရာ မပေါက် ဖြစ်နေမည် ၊အနည်းငယ် လေး ပေါက်နေပြီး ဆို လျှင်လည်း ဗေနာဗရ်အဟ်သရာသ် ရိတ် ပိုင်ခွင့် မရှိချေ။
(၁၂၉) မေး။။မောင်ဖြူအမည်ရှိပုဂ္ဂိုလ်တစ်ယောက်သည်မောင်ဝါနှင့်ပတ်သက်ပြီး၎င်း တွင်တ ကယ် မရှိသည် မကောင်း မှုများကို လူအများဆီ အီးမေးလ်များဖြင့် ပို့မည်။ ၎င်းမောင်ဝါ ကို အယုံအကြည်ပျက်အောင်လုပ်မည်။
မောင်ဝါ၏ရပိုင်ခွင့် ကို အပြည့်အဝ ဆောက်ရွက်ပြီးသာလည်းဖြစ်ရန် မည်သို့ပြု ရမည်နည်း
၎င်းမောင်ဝါနှင့် ပတ်သက်ပြီး အီးမေးလ် ပို့ထားသူများထံ ပြန်ပြီး မောင်ဝါသည် ဤကဲ့သို့မဟုတ် ကြောင်း ရှင်းချက် ပြန် ပို့ပေးရမည်လော …
ဖြေ ။ ။ မလွဲမသွေ ၎င်းမောင်ဝါနှင့် ပတ်သက်ပြီး အီးမေးလ် ပို့ထားသူများထံ ပြန်ပြီး မောင်ဝါသည်ဤကဲ့သို့မဟုတ် ကြောင်း ရှင်းချက် ပြန် ပို့ကို ပေးရမည်။ ထိုပြင်အစွပ်စွဲခံခဲ့ရသူ မောင်ဝါ၏ ကျေနပ်မှုကို ရယူရပေမည်။
(၁၃၀) မေး ။ ။အစ္စလာမ်မိုအလိုင်ကွမ်း
တစ်ချို့ရှီအာများသည် နာမာဇ်ဖတ်အပြီး ညာဘက်နှင့်ဘယ်ဘက် သို့လှည့်၍ စလာမ်ပေးကြပါသည်။ ဘာလို့ဆိုတာရှင်းပြပေးပါ။
ဖြေ ။ ။ဟဇရတ် အာယာသွလ်လ္လာဟ် ခါမေနာအီ ရုံး ၏ ဖြေဆိုချက်အရ နာမာဇ်တွင် စလာမ်ဖတ်အပြီး ညာဘက်နှင့်ဘယ်ဘက် သို့လှည်ခြင်းသည် ((မိုဗာ)) ဖြစ်ပေ သည်။ စဝါဇ်လည်း မရ သလို၊ အပြစ်လည်း မရှိချေ။
(၁၃၀) မေး ။ ။ စလာမ်
ကျမ်းမြတ်ကုရ်အာန်ထဲမှာ အေမာမ်အလီ(အ.စ)ရဲ့နာမတော်ကိုဖေါ်ပြထားပါ သလား..
မောင်လာအလီ(အ.စ)အကြောင်း အောက်ဖော်ပြထားသည့်ဟဒီးစ်တော်သည် အရမ်းကိုလုံလောက်၊ခိုင်လုံနေပါပြီး။
((အလီ(အ.စ) သည် ကုရ်အာန် နှင့်အတူ ရှိပြီး ၊ ကုရ်အာန် သည် အလီ(အ.စ) နှင့်အတူရှိ၏))တမန်တော်မြတ်ကြီး (ဆွ)
ကြည့် - မိုစ်သ၊သရာခ် အလာဆဟီးဟိုင်းကျမ်း အတွဲ (၃) စာမျက်နှာ ၁၂၄ ပိုပြီးအသေးစိတ်လေ့လာလိုရင်တော့လက်ရှိသာသနာပညာရှင်ကြီးတစ်ပါးဖြစ်သည့်(နဂျဟ် သာအီ)ရေးသားထားသည်စာအုပ် لماذا ذکر اسم علی (ع) فی القرآن کثیراَ؟ ကို လေ့လာနိုင်ပါသည်။
ပြီးနောက် လက်ရှိ နိုက်ဗေ အေမာမ်တစ်ပါးဖြစ်သည် ဟဇရတ် အာယသာသွလ်လ္လာဟ် အလ်အွဇ်မာဆရက် ဆွာဒစ်က်ဟိုစိုင်းနီ ရှီရာဇီးရေးသား ထားသည့် علی علیه السلام فی القرآن အတွဲ (၁ နှင့်၂) ကို လေ့လာ နိုင်ပေသည်။
(၁၃၁) မေး ။ ။ ဇနီးသည် အနေဖြင့် မိမိခင်ပွန်းသည်၏ ခွင့်ပြုချက် မရှိဘဲ စီးပွားရေး၊နိုင်ငံရေး ၊ လူမှုရေးလှုပ်ရှားမှု များအတွက် အိမ်အပြင်ထွက်လို့ ရပါသလား
(၁၃၂) မေး ။ ။ နမာဇ်စေ ဂိုဖိုင်လာဖတ်ရာတွင် ၂ ရကတ် စလုံး၌ စူရဟ် (ဟမ်ဒ်) ဖတ်ပြီးနောက် ဖတ်ရန် ပြဆိုထားသည်အာယတ်တော်များကို မဖတ်မည် အရင် ဗစ်မေလ်လ္လာဟ်…ဖတ်ရန် လိုအပ် ပါသလား
(၁၃၃) မေး ။ ။ နမာဇ်စေ ဂိုဖိုင်လာ သည် နာဖေလေဟ် နမာဇ်စေ မဂ်ရေဗ် စာရင်းဝင်ပါသလား
ဖြေ။ ။ ပြဿနာမဟုတ်ချေ။နီယသ် နှစ်ခုလုံးအတွက် ((ကဇ်ဒ်ဒေရေဂျာ)) (အလ္လာဟ်ဟိုအရှင်မြတ် နှစ်သက်မှုအတွက်) နီယသ် ဖြင့် ဖတ်မည် ဆိုလျှင် နီယသ်နှစ်ခုစလုံး၏ စဝါးဗ် ရရှိမည် ဟု မျှော်လင့် မိ ပါသည် ။
(၁၃၄) မေး ။ ။ မဟာတမန်တော်မြတ်ကြီး ဟဇရတ် မိုဟမ္မဒ် (ဆွ) သခင် သည် အဆိပ်ကြောင့် ဝဖားသ် ဖြစ်သွားတော်မူသည် မှာ မှန်ပါသလား ?
ဖြေ ။ ။ ဤ အကြောင်းနှင့် ပတ် သက်ပြီး အိုလမာ များ အကြား အဆိုများကွဲလွဲ ပေသည်။
သို့သော် ရှီအာ အိုလမာ အများစု နှင့် စွန္နီအိုလမာတို့သည် မဟာတမန်တော် မြတ်ကြီး ဟဇရတ် မိုဟမ္မဒ် (ဆွ) သခင် သည် အဆိပ်ကြောင့် ဝဖားသ် ဖြစ်သွား တော်မူသည် ဟုခံယူထားပေသည်။
သာဓက အားဖြင့် ရှီအာ အိုလမာများမှာရှိက်ခ် မိုဖီးသ်(ရ.ဟ)ရှိက်ခ် သူစီ(ရ.ဟ)
ကြည့် - အလ်မက်နာအေကျမ်း စာမျက်နှာ ၄၅၆ ၊ သဲဟ်ဇီးဗိုလ်အဟ်ကာမ်ကျမ်း အတွဲ ၆ စာမျက်နှာ ၂ ၊သဟ်ရီရွလ် အဟ်ကာမ် ကျမ်း အတွဲ ၂ စာမျက်နှာ ၁၁၈
စွန္နီ အိုလမာများမှာ ဂျနာဗေ ဟာကင်မ်မေနေရှာပူရီ ၊ဂျနာဗေ ဇဲဟ်ရီ ၊
ကြည့် - မိုစ်သ၊သရာခ် အလာဆဟီးဟိုင်းကျမ်း အတွဲ (၃) စာမျက်နှာ ၆၁၊ သွာဗကာသ်သေဂိုဗရာကျမ်း အတွဲ
(၁၃၅) မေး ။ ။ အဘယ်ကြောင့်ဒိုအာ ကဗူလ် မဖြစ်ရပါသနည်း
ဟွဂျသွလ်အစ္စလာမ် မော်စင်ကရာအတ်သီထိုပြင်ဟဒီးစ်တော်၌ လာရှိသည်မှာ -
(၁၃၆) မေး ။ ။ ဟေဂျပ် သည်(အစ္စလာမ်) သာသာ၏ အရေးကြီးသည် အပိုင်းဖြစ်ပါသလား?
(၁၃၇) မေး ။ ။ စလာမ်
ဖြေ ။ ။ ရှိပါသည် ဤ အတွက်ကြောင့်အစ္စလာမ်မစ် အီရန်နိုင်ငံတွင် တရားဝင်بــيـمــهခေါ် Insurance ရုံးများရှိပါသည်။
ထိုပြင် ဟဇရတ်(သ)အာယာသွလ္လာဟ်အလ်အွဇ်မာအလ်ဟဂ်ျနာစေရ်မကာရေမ်မို ရှီးရာဇီးမှလည်း မိမိ၏ သောင်ဇီးလ်အွလ်မဆာအေလ်ကျမ်း ဥပဒေ အမှတ် ၂၄၃၈ - ၂၄၃၉ - ၂၄၄၀ တွင် ဤကိစ္စ နှင့်စပ်လျဉ်းပြီး ဖော်ပြထားပါတယ်။
(၁၃၈) မေး ။ ။ နမာဇ်ဖတ်ခြင်း ၏ အကျိုးကျေးဇူးလေးကို သိပါစေ ။
(၁၃၉) မေး ။ ။ နမာဇ်ဖတ်ခြင်း အကျိုးကျေးဇူးလေးကို သိပါစေ ။
(၁၄၀) မေး ။ ။စလမ်မို အလိုင်းကွမ်
(၁၄၁) မေး ။ ။ အကယ်၍ မိန်းကလေး တစ်ဦး အနေဖြင့် ကုရ်အာန်ကျမ်းမြတ် ၊ ကဗျာ ၊ကစီသာ ကို အသံထွက်ပြီး ၊ နမဟ်ရမ် အမျိုးသား များ အရှေ့တွင် ဖတ်ရွတ်မည်ဆိုပါက ဂိုနာ(အပြစ်) ရှိ ပါသလား
(၁၄၂) မေး။။မွတ်စလင်မဟုတ်သည်မိန်းမများနှင့်ချက်(chat)လုပ်မည်၊ မွတ်စလင်မဟုတ်ဟုသိထားသဖြင့်အင်တာနက်မှ အလွဲသုံးစားလုပ်ပြီး ၎င်းနှင့်
(၁၄၃)မေး။ ဗစ်မေဟီ သအာလာ
အချို့မောင်လာနာများ သည် မောင်လာနာများ၏ ဥက္ကဋ္ဌ အဖြင့်၎င်း ၊ ကျောင်းအုပ် ၊ သဗ်လီးဂ်ဌာနတာဝန်ခံ ၊ကိုယ်စားလှယ် စသည်ဖြင့် တာဝန်ယူကြသည် ။ သို့သော်ဝဟာဘီ များဖက် မှ တရားများ၊ စာအုပ်များ ၊ ဆိုက်များ ၊ဝက်ဗလောက်များ ဖြင့် ရှီအာ ဆန့်ကျင်ရေး လုပ်နေ သည်ကို မကာကွယ်ပေးချေ။ဤ လုပ်ရပ်အတွက် မည်ကဲ့ သို့ အမိန့် ရှိပါ သနည်း
(၁၄၄)မေး။ ကျွန်တော်တို့ ၏ အမိမြန်မာပြည်တွင် ဝဟာဘီ များသည် တရားများ၊ စာအုပ်များ ၊ ဆိုက်များ ၊ဝက်ဗလောက်များဖြင့် ရှီအာ ဆန့်ကျင်ရေး လုပ်နေပါသည်။
ဟောင်းများ)(သို့) သွလ်လါဗ်ဂျဒီးဒ်(သာသနာ့ကျောင်းသားသစ်များ) (သို့)ပြည်သူ များ(ရှီအာလူထု) မည်သူဖက်မှာ တာဝန်ရှိပါသနည်း ?
(၁၄၅) မေး ။ ။ ကာဖေရ်အမျိုးသမီးများ(ခရစ်ယာန်နှင့်ရဟူဒီမပါ)နှင့် ကိုယ်လက်နှီးနှော ခြင်းအတွက် မည်သည် အမိန့်ရှိပါသနည်း ၎င်းတို့သည် ကနီးစ်များ စာရင်းဝင်ပါသလား ရှရီအတ်အရ မည်သို့ရှိပါ သနည်း
ဖြေ ။ ။ ကာဖေရ်အမျိုးသမီးများ(ခရစ်ယာန်နှင့်ရဟူဒီမပါ) ကိုယ်လက်နှီးနှော ခြင်းသည် ဇေနာ(မုဒိန်းမှု) ဖြစ်ပါသည်။အကယ်၍ ခရစ်ယာန်နှင့်ရဟူဒီ ဖြစ်နေပါ ၎င်း၏သဘောတူညီချက်ဖြင့် မိုသာဖတ်ခဲ့မည်၊ပြီးမှ ကိုယ်လက်နှီးနှောမည် ဆိုလျှင် ၎င်းသည်တရားဝင်ဇနီးသည် စာရင်းဝင်ပေမည်။သို့မဟုတ်ပါက ဇေနာ(မုဒိန်းမှု) ဖြစ်ပါသည်။
(၁၄၆) မေး ။ ။ အပြာရုပ်ရှင်များ၊ဆောင်းပါးများ ဖြင့် ကာမစက်ယှက်နည်း ၊ကိုယ်လက်နှီးနှောနည်း၊သင်လိုရပါသလား?
ဖြေ ။ ။ မရချေ (ခွင့်မရှိ)။ အချိန်ကြာလာလျှင်မကောင်းသည်ရလာဒ်များရလာ ပေမည်။
(၁၄၇) မေး ။ ။ စဲဟ်မေ စါဒါသ် ပေးရမည် ဆယက်ဒ်များ တွင်ရှိရမည့် စည်းကမ်း ချက် များ ကို ဖော်ပြ ပါ။
ဖြေ ။ ။ စဲဟ်မေ စါဒါသ် ပေးရမည် ဆယက်ဒ်များ တွင်ရှိရမည့် စည်းကမ်း ချက် များ မှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါတယ်။
၁။ ဆယက်ဒ် ဖြစ်ရပါမယ် (အစစ် ဖြစ်ရပါမည်။ )
၂။ အီမာန် အရ ၁၂ ပါး အေမာမ်ကို လက်ခံသူ ရှီအာ အေမာမ် မီယေ ဖြစ်ရပါမည်။
၃။ ဆင်းရဲချို့တဲ့ သူဖြစ်ရမည်။
၄။ ဝါဂျစ်ဗ် နဖ်ကေ မှ မဖြစ်ရ ။ (ဆိုလိုသည်မှာ မိမိ ကျွေးရမည့်တာဝန်ရှိသူများ ဇနီး ၊သားသမီး ၊ ဆင်းရဲသူ အဖေ အမေ ကိုဆိုလိုပါသည်။၎င်းတို့မှ မဖြစ်ရဖို့လိုပါသည်။ )
၅။ ဂိုနာများတွင် အသုံးပြုခြင်း မပြုသူ ဖြစ်ရမည်။
၆။ လူမြင်ကွင်းတွင် ပေါ်တင် ဂိုနာ မလုပ်သူ ဖြစ်ရပါမည်။
(၁၄၈) မေး ။ ။ မယက်သ် ကို ရေချိုးပေးသူတွင် ရှိရမည့် စည်းကမ်း ချက်များ ကို ဖော်ပြပါ။
ဖြေ ။ ။ မိုင်ယစ်သ် ကိုရေချိုးပေးသူတွင် အတွင်း အောက်ဖော်ပြပါ အချက် ၅ ချက်နှင့် ပြည့် ရန် လိုအပ်ပါတယ်။
၁။ရှီအာ အေမာမ် မီယာ ဖြစ်ရမည်။
၂။ အရွယ်ရောက်ပြီးသူ ဖြစ်ရမည်။
၃။ ရူးသွပ်သူ မဖြစ်ရ ။
၄။ ဂိုစ်နှင့်ပတ်သက်သည့် ဥပဒေများ ကို နားည်သူ ဖြစ်ရမည်။
၅။ အကယ်၍ မိုင်ယစ်သ် အမျိုးသားဆို အမျိုး သား ၊ အကယ်၍ အမျိုးသမီးဆိုလျှင် အမျိုး သမီး ရေချိုး ပေးသူ ဖြစ်ရမည်။
(၁၄၉ ) မေး ။ ။ နမာဇ်စေ မိုင်ယစ်သ် တွင် ပါဝင်ပေးသည်စဝါးဗ် ကို သိချင်ပါတယ် ။
ဖြေ ။ ။ ။ နမာဇ်စေ မိုင်ယစ်သ် တွင် ပါဝင်ပေးသည်စဝါးဗ် အမြောက်အများ ရှိ ကြောင်း လာရှိပါတယ်။ ရီဝါယသ်တော် အရ နမာဇ်စေ မယက်သ် တွင် ပါဝင်ပြီး နမာဇ် မိုင်ယစ်သ် ဖတ်ပေးပြီး ပြန်ချိန် အထိ ၎င်း ခြေလှမ်းတိုင်း အတွက်
ကောင်းမှု ကုသိုလ် ၁၀သိန်း
မကောင်းမှု ၁၀သိန်းကို ခွင့်လွတ်ပေးခြင်း
အဆင့့်် ၁၀သိန်း မြှင့်ပေးကြောင်း ကို ရေးသား ထားပေမည်။
မောင်လာနာ ဒါဝဒ်ဒါနီ ၏ အဲဟ်ကမ်မေမိုင်ယစ်သ် စာမျက်နှာ ၂၇
(၁၅၀ ) မေး ။ ။ ခွမ်းစ် နှင့်ဇကားသ် မပေးထားသည့် ငွေ ဖြင့် ဝယ်ထားသည့် အဝတ်နှင့် နမာဇ် ဖတ်လျှင် ပိုင်ပါ သလား ?
ဖြေ။ ။ မပိုင်ပါ ။